Shacabka dalka Jabuuti oo maanta u dareeray doorasho - Jowhar somali news leader
Home NEWS Shacabka dalka Jabuuti oo maanta u dareeray doorasho
Shacabka dalka Jabuuti oo maanta u dareeray doorasho
Shacabka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta oo Jimca ah u dareereen codbixinta doorashada 2021 oo ay ku tartamayaan Madaxweynaha xukunka haya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Musharaxa madaxa bannaan ee Sakariye Ismaaciil Faarax.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa Hay’adaha ammaanka, waaxda Caafimaadka iyo Guddiga Doorashada faray in ay ku dedaalaan xasiloonida Jamhuuriyadda inta lagu howlan yahay Codbixinta Doorashada.
Goobaha dadka ay ku codeynayaan ee la dhigey sanduuqyada codeynta waxaa lagu diyaariyay Gacmo dhaq Marada Afka iyo sanka daboosha, waxaana aad loo ilaalinayaa isu dhawaanta dadka sida ka muuqaata muuqaallada laga soo duubay goobaha codbixinta.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka mid ah dadka saaka codkooda dhiibtay.
Guddiga Doorashada ayaa marka uu soo dhammeeyo codbixinta dadka qaatay kaararka kadib xiri doona Goobaha codeynta waxaana uu ku dhaqaaqayaa tirinta si natiijada usoo baxda uu u shaaciyo sida ku xusan jadwal howleedka Guddigaas.
Previous articleDagaaladii u dhexeeyay Canfarta iyo Soomaalida Ethiopia oo la joojiyay
Next articleConcerns in Benin before the vote critics say are skewed to favor sitting Talon